Rarible ကဘာလဲ? ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 5, 2021 မေလ 3, 2021 isa Charlotte ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, Cryptocurrency ဝန်ဆောင်မှု, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick
သုံးစွဲသူများသည်အကောင့်တစ်ခု ဖန်တီး၍ သီးခြားတိုကင်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ဖန်တီးမှုများကိုရောင်းချနိုင်သည်။
Ethereum blockchain ပေါ်တွင်သိသိသာသာကျယ်သောပြေးသည်။
သင်တိုကင်ကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်သင်၏တိုကင်များကို ၀ ယ်သူများအတွက်သင်ရလိုသောရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်သင့်ဂီတကိုတင်နိုင်သည်။
Rarible ကဘာလဲ? - အကျဉ်းချုပ်နိဒါန်း
အကယ်၍ သင်သည် crypto နေရာ၌အဆင့်မြင့်စွာအဆင့်မြှင့်တင်ခံထားရလျှင် Rarible ဟူသောဝေါဟာရနှင့်၎င်းစတင်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောသက်ရောက်မှုအကြောင်းသင်ကြားသိရဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည့် NFT Marketplace တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စတင်မိတ်ဆက်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းထူးခြားသော ၀ ယ်သူ ၂၉၀၀၀ ကျော်နှင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ ၂၉ သန်းခန့်ရှိသည်။
Rarible တွင်ပါ ၀ င်သည့်နာမည်ကြီးများစာရင်းတွင် Lindsay Lohan, Mark Cuban နှင့် Tyra ကဲ့သို့ထင်ရှားသောနာမည်များပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အနုပညာရှင်များနှင့်စုဆောင်းသူများအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာပြီး၎င်းသည်လုံခြုံမှုကိုပါရရှိစေသည်။ လာမည့်လိုင်းများတွင် Rarible ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ခြင်း၊ ယင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာကြပါစို့။
ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မယ့်အစား, ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက် blockchain ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
Rarible ကဲ့သို့သော NFT စျေးကွက်ကိုနားလည်ရန် fungibility ၏သဘောတရားကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ Fungibility သည် blockchain နည်းပညာကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်တွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုရရှိစေသည်။
အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ဟုယူဆပါက၎င်းကိုအခြားသောတန်ဖိုးရှိအခြားပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုနှင့်အလွယ်တကူလဲလှယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သေးငယ်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးသောဥပမာတစ်ခုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်အခြားတရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၁၀ တန်မှတ်စုကိုဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှ ၁၀ ဒေါ်လာထိလွယ်ကူစွာလဲလှယ်နိုင်သည်။ တန်ဖိုးလုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကြည့်ရှုလိုပါကမည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုမျှမပြုလုပ်နိုင်သည့်“ ထူးခြားသော” အရာများရှိသည်။ ဤဥပမာ၏နမူနာသည်စုဆောင်းစရာပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ပန်းချီကားသန်းတစ်ရာရှိကောင်းရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းလီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ် ဦး ၏အနုပညာလက်ရာများကိုပြုပြင်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။
NFT တစ်ခုအားဆင်တူသည်။ သို့သော် blockchain / digital world တွင်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မယ့်အစား, ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက် blockchain ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ၎င်းသည်အတုအနုပညာလက်ရာများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ယခင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အနုပညာ၏စစ်မှန်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့သောအားသာချက်များစွာရရှိသည်။ ၎င်းသည်လူတို့အား၎င်းအားလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်လိုအပ်သောစောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစားကိုစဉ်းစားရန်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားအနေဖြင့်အမှန်တကယ်မရှိခြင်းအတွက်နေရာကိုလည်းပေးသည်။
NFT ဖြစ်စဉ်ကိုဒီဂျစ်တယ်အနုပညာ၊ ဂီတဖန်တီးမှုများ၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ပင်မပိုင်ဆိုင်မှုများအထိပင်ယူဆောင်လာနိုင်သည်။ Rarible သည် NFT ၏လွယ်ကူသောရောင်းဝယ်မှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပြုလုပ်ရာတွင်လွယ်ကူချောမွေ့စေသောထိုကဲ့သို့သော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ Rarible သည်မှိုမဟုတ်သောတိုကင်များအမေဇုန်နှင့်တူသည်ဟုဆိုခြင်းသည်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
NFT Platform တစ်ခုသည် Rarible Work ကိုမည်သို့နှစ်သက်သနည်း။
NFT စျေးကွက်အများစုသည် Rarible ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်အကောင့်တစ်ခု ဖန်တီး၍ သီးခြားတိုကင်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ဖန်တီးမှုများကိုရောင်းချနိုင်သည်။ ရုပ်ပုံများ၊ တေးဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးပြီးရေရှည်အကျိုးအမြတ်အတွက်ရောင်းလိုသူများအတွက်ဤအရာသည်အသုံးဝင်သည်။
Rarible သည်ဤဖန်တီးသူများအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေးသည်။ NFT Marketplace ကို IndieGoGo နှင့် Etsy တို့၏နေရာတစ်နေရာတွင်နေရာချနိုင်သည်။ တစ်ဖက်တွင်ရန်ပုံငွေပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့်လူတို့သည်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဖန်တီးသူများ၏ဖန်တီးမှုကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Etsy လဒ် NFT ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရောင်းချထားသည့်ထုတ်ကုန်များ၏ထူးခြားမှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။
Rarible ၏အောင်မြင်မှုကိုအကြီးမားဆုံးသက်သေပြချက်တစ်ခုမှာ ParaFi, 1.75kx, CoinFund နှင့် CoinBase စသည့်နာမည်ကြီးအမည်များမှရရှိသောဒေါ်လာ ၁.၇၅ သန်းရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ ရန်ပုံငွေကိုယ်နှိုက်ကကြီးမားသောသတင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် crypto အာကာသအတွင်းရှိအကြီးဆုံးနာမည်အချို့မှကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့်အချက်က NFT စျေးကွက်များသည်အမြတ်အစွန်းရရန်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းပြသသည်။
Rarible ကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ စတင်တည်ထောင်သည့်ပထမနှစ်တွင်ထူးခြားသောပစ္စည်း ၁ သန်းကျော်ကို Rarible တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 Rarible တိုကင်ဖန်တီးသူများနှင့်စုဆောင်းသူများအားဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
Rarible သည်သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်နှေးကွေးပြီးတည်ငြိမ်သည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခြောက်လအတွင်း Rarible ၏ရောင်းအားသည် ၅၀၀% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀၊ ဇွန်လတွင်ရောင်းအားဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးအရခိုင်မာတောင့်တင်းမှုရှိပြီး Twitter တွင်နောက်လိုက် ၁၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများရှိနေခြင်းကြောင့်ယင်းကိုမြင်ရခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
သင်သိခဲ့သည့်အတိုင်း Rarible သည် Ethereum blockchain ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်လူတို့အားတိုကင်များကိုဖန်တီးရုံသာမက Rarible ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကဲ့သို့ Conceptualize နှင့်တည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
NFT Minting - ဥပမာနှင့်အတူ Rarible ၏အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှု
လူများသို့မဟုတ်တီထွင်သူများသည် Rarible ဈေးတွင်ကိုယ်ပိုင်တိုကင်များကိုဖန်တီးကြသောကြောင့်၎င်းကိုပန်းချီကားအဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြား NFT စျေးကွက်တွေကအနုပညာရှင်တွေဆီကအနုပညာလက်ရာတွေကိုပလက်ဖောင်းပေါ်မတင်ခင်မှာ curate လုပ်ဖို့အချိန်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်လို့ Rarible ကဆိုပါတယ်။ Rarible တွင်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်ကြာရှည်ခြင်းမရှိပါ။ မည်သူမဆို Rarible တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသက်သေကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုဘလော့ဂ်များမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုအကြီးအကျယ်ကြိုဆိုသည့်အပြုအမူဟုယူဆနိုင်သည်။ ဒီဂိတ်တံခါးဖွင့်လှစ်မှုကြောင့်လူငယ်စွမ်းရည်နှင့်လာမည့်အနုပညာရှင်များပင် Rarible တွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်တိုကင်များကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်းလှည့်စားသူများကပလက်ဖောင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းစွာထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အခွင့်အလမ်းများကိုဖွင့်ပေးသည်။ Rarible သည်ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များကိုလျော့ပါးစေရန်အတည်ပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Rarible တွင်လက္ခဏာသက်သေတစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည် crypto ကမ္ဘာတွင်အရိုးရှင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသူတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ သင်၏ crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်ရောင်းသည့်အရာပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာတစ်ခုသို့မဟုတ်ထပ်ပေါင်းများစွာပါသောတိုကင်တစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်တိုကင်ကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်သင်၏တိုကင်များကို ၀ ယ်သူများအတွက်သင်ရလိုသောရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်သင့်ဂီတကိုတင်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ခြင်း၊ သင်၏တိုကင်အမည်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ဖော်ပြချက်တစ်ခုပေးခြင်းနှင့် royalties နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အပိုင်းများကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုသင်ပေးပြီးတဲ့အခါ၊ 'create item' ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်သည်ဓာတ်ငွေ့အခကြေးငွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး၊ blockchain ၏အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သင်ပေးရမည့်အခကြေးငွေဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့ခများမြင့်မားသည့်ဖြစ်ရပ်များရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖန်တီးသူများစွာက၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်ဟုသဘောတူကြသည်။ သင်၏ fees ည့်သည်အခများနိမ့်ကျနေရန်သေချာစေရန်သင်၏ NFT ပူနွေးစေရန်မှန်ကန်သောအချိန်ကိုသင်ရွေးချယ်ရလိမ့်မည်။
စီးပွားရေးပုံစံမရှိဘဲနှင့်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှမပြီးပါ။ Rarible ကငွေရှာတဲ့နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ စီအီးအိုနှင့် Rarible ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Alexei Falin ၏စကားအရစျေးကွက်စာရင်းအတွက်အခကြေးငွေများကို ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာတွင်သာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် Rarible နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုအခမဲ့အခမဲ့ရရှိခဲ့သည်။
စာရင်းအခကြေးငွေအတော်အတန်နည်းသော်လည်း Rarible ရှိစာရင်းအရေအတွက်သည်ပလက်ဖောင်းမှအမြတ်အစွန်းအလုံအလောက်ရရှိစေသည်။ Rarible သည်သူ့ကိုယ်သူ crypto art အတွက်ပလက်ဖောင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းတို့သည် crypto အာကာသအတွင်းရှိအခြားအမျိုးအစားများသို့တိုးချဲ့ရန်မျှော်လင့်သည်။ ၎င်းတို့သည်အရွယ်အစားကြီးမားသောဖြေရှင်းချက်များရရှိပြီးသည့်နောက်သူတို့သည် crypto မဟုတ်သောကမ္ဘာသို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုစတင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Rarible အတွက်သာမကရာစုနှစ်များစွာအတူတကွတည်ရှိနေသောအရာတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲစေသည့်အခြား crypto စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုမှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်နေရာသို့ပြောင်းရွေ့သွားစဉ်တွင်အိုင်အက်စ်အခွင့်အရေးနှင့်မူပိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပွတ်တိုက်မှုများစွာဖြင့်အမြစ်တွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည်အရည်အချင်းမရှိသော၊ ဗျူရိုကရေစီစနစ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတိုးတက်မှုမည်မျှမြန်ဆန်စွာနောက်ကျကျန်ခဲ့သည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
တရား ၀ င်စနစ်သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောလယ်ဂျာနည်းပညာကိုလိုက်လျောညီထွေစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သဖြင့်မကြာမီပြောင်းလဲမှုများဖြစ်လာနိုင်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာ၊ ဂိမ်းပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ တီဗွီရှိုးများ၊ ဒါကဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဒုတိယစျေးကွက်ဖွင့်ပေးတယ်၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြrespectနာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတယ်။
အနာဂတ် - နိဂုံး
Rarible ကမီးပွားအဖြစ်စတင်ခဲ့ခြင်းသည်မကြာမီအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောနှင့်ဖြန့်ဝေထားသောဒေတာဘေ့စ်ကို blockchain တွင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီးမည်သူမဆိုစီးပွားဖြစ်နှင့်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်လုံးဝတရား ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်း ယင်းသည်ပထဝီဆိုင်ရာအတားအဆီးများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲပုံတူပွားခြင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပိုမိုစိတ်ချရသောဖြစ်သည်။
Rarible ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စျေးကွက်သည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင် ၁၀၀၀% တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၊ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမှုရှိလိမ့်မည်။ ရပ်ရွာကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအကျိုးစီးပွားတိုးများလာသည်။ ယခုအချိန်တွင် Rarible ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်လူတို့အားပါ ၀ င်ရန်မက်လုံးများဖန်တီးပေးပြီးအသိပညာတိုးပွားစေရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။
အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ အနာဂတ် crypto စွန့် ဦး တီထွင်သူများစွာတို့သည် NFT စျေးကွက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စဉ်းစားနေကြသည်ကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ တိုးတက်မှုအတွက်သာမကအမြတ်အစွန်းအတွက်လည်းအလားအလာအချို့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဗဟိုလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှအုပ်ချုပ်သောဖန်တီးသူပတ်ဝန်းကျင်ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရန်ကူညီနိုင်သည်။
သငျသညျတစ်ခုတည်ဆောက်ချင်ပါတယ်သောသူတို့အားလုပ်ငန်းရှင်များထဲကတစ် ဦး လျှင် Rarible တူသော NFT ပလက်ဖောင်းယေဘူယျအားဖြင့် blockchain ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် NFT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုနားလည်ရန်နှင့် Rarible ကဲ့သို့သောပြီးပြည့်စုံသော NFT စျေးကွက်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်အမြတ်အစွန်း၏ crypto space သို့စတင်နိုင်သည်။
အများပိုင်သတင်း rarible လို NFT Marketplace
Blockchain သုတေသန Analyst